Global Voices teny Malagasy » Slovakia: Vola Be Azo Avy Amin’ny Hira · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Aogositra 2011 18:36 GMT 1	 · Mpanoratra Tibor Blazko Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Slovakia, Lalàna, Mozika, Toekarena sy Fandraharahàna, Zavakanto & Kolontsaina
Herinandro vitsy lasa izay, ny Slovak Performing and Mechanical Rights society ‘ (SOZA) – ny fikambanana mpiaro ny zo amin'ny fandikàna (copyright) ao amin'ny firenena – dia nanomboka nampadoa vola ireo lohamilina anaty tranonkala, indrindra fa ireo natao ho an'ny tanora mpankafy mozika, izay efa nampiditra lahatsary You Tube sy Vimeo ao amin'ny pejin'izy ireo :
Ny fikambanana moa dia nangataka  [sk] 33.20 euro isam-bolana, na raha toa ka tsy manana taratasy fahazohan-dàlana avy amin'ny SOZA, dia manadoa onitra 99.6 euro. Na eo aza izany, dia nanizingizina  [sk] mafy ilay bilaogera sy mpisolovava, Martin Husovec [sk] fa tsy misy lalàna mamela ny SOZA hampandoa onitra na amin'iza na amin'iza.
Andramana hoe hatraiza no fetra
YouTube avy amin'ny Flickr mpampiasa ny "codenamecueball" (CC BY 2.0).
Rehefa tsinjon'ireo tsirairay avy tany ambadiky ny lohamilina tany fa tsy irery izy ireo, dia nitambatra izy ireo tamin'ny fanomezana valiteny ; na izany aza, sarotra ho an'izy ireo ny nanazava tamin'ny SOZA fa tsy nisy fahasamihafana ny rohy mankany amin'ireo lahatsary hita avy amin'ireo lohamilina hafa sy ny lahatsary natsofoka avy amin'ilay loharano mitovy.
Andramana hoe hatraiza no fetra, nametraham-panotaniana ny SOZA raha toa ka ekena ny fandefasana ireo ROHY  mankany aminà ampahan-kira. Araka ny fijerin'ny bilaogera iray, Michael “Smith” Dragan avy ao amin'ny Bolaogy Midra, dia namaly ny lehiben'ny sampan'asa misahana ny haino aman-jery ao amin'ny SOZA [sk] : “Inona no atao hoe ROHY?”  i Juraj Grecnár bilaogera koa dia nisintona ny sain'ny mpamorona zava-baovao ao amin'ny SOZA “rohy hyperactive text”  (ny rohy hypertext no lazaina eto), izay nahazo laza tampoka.
Tsy ireo mpamorona miasa ao amin'ny tranonkala ihany.
Tsy ireo mpamorona miasa amin'ny tranonkala ihany no nihetsika be. Fa na ireo olona tsotra ihany koa aza dia nanomboka namely ny tranonkalan'ny SOZA tamin'ny fanatsofohana lahatsary ary dia nifandray tamin'ireo mpanome fanampiana amin'ny alalan'ny antso ao aminy mha hitondra fanazavana  [sk] momba ny, indraindray ankosotra fotsiny, ireo olana avy amin'ny taratasy fahazoan-dàlana.
Noforonina hatraminà pejy Facebook iray aza ho an'ilay tontolo nofinofy Slovak protection racket association (SOVA)  [sk] – na Fikambanam-Piarovana Slovaky Mpanotra Vola – ho toy ny sehatra hifapizaràna vaovao, fifanakalozan-dresaka sy vazivazy. Noho izany, niforona nanaraka izany ireo sarisarin-dresaka tao amin'ny aterineto :
Tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo dia bemidina tany amin'ny toeram-pitsangatsanganana ireo mpananaramasonay, ka nahita tanora marobe efa mamo mihirahira eny imasom-bahoaka. Raha atao bango tokana dia tranga 54 isa no voaray teto am-pelatànana, tafiditra ao anatin'izany ireo gadon-kira folk 22 izay tsy nahazahoanay afa tsy ampaham-bola fotsiny noho ny tsy fahafantarana ny mpamorona.
Luboš Hulmiukolen :
Miarahaba, manana fanontaniana iray hafa aho. marary ny lohako, antony dia noho ny hiran'ny mpihira slovak iray malaza. Mety mba hisy onitra ho ahy ve?
SOVA (namaly) :
Tsy hanome onitra ny mpihaino noho izy nihaino mozika izany ny SOVA. Ireo mpamorona ihany no hahazo valisoa avy amin'ny SOVA satria izy ireo no alefa sy henoina!
Ny mpanaramasonay dia vavolombelon'ny fandevenana iray, izay nanatanterahan'ireo fianakaviana minitra fahanginana ho fanajana ny maty. Izany no nahatonga azy tsy niandry ela fa nanome mialoha ho azy ireo ny faktioran'ny ampahan'ilay rakikira 4'33” noforonin'i John Cage nalefa imasom-bahoaka tsy nanaovana fampilazàna!
Mbola mieritreritra feonkira iray izay foana aho, fa tsy azoko antoka hoe iza amin'ireny no izy… tsara ve raha andoavako vola daholo ireo artista rehetra misy eo…?
Andeha hiaraka amin'ireo namako any amin'ny trano fisintahana faran'ny herinandro aho amin'io farany herinandro io. Ahoana ary ohatrinona no vola tokony haloako hafahako mahazo alàlana mitendry gitàra eny amin'ny toerana fanaovana afondasy?
Tahaka ny hoe tafiditra koa ny feo faratampony sy ireo onjam-peo mafy tsy hay henoina. Tandremo! Tsy vazivazy izany. Indraindray aza ampy handoavanao 2.000 Euro ny fifohanao rivotra mameno tratra..
Androany izao dia nahita tranga iray ilay mpanaramasonay, mpitaiza ankizikely iray nampianatra feon-biby ireo ankizikely tao amin'ilay trano fitaizana ankizikely nefa tsy mandoha vola ho an'ny zo amin'ny fandikàna akory tamin'ny fampiasàna azy ireo!
Aminay dia ianao ilay tena lafatra, te hisoratra anarana ho isan'ny ekipanao izaho sy ny akamako. Tsy manana afa tsy 3,674 Euro izahay nefa mino izahay fa ampy ho entina manomboka io. Ary te hanontany koa izahay, raha toa izahay…ehm…afaka mihira ny hiranay mandritra ireo fampisehoana dia asiana tambiny kely. Azo tanterahana ve? Mety ho ohatrinona eo anefa izany?
Tato ho ato, tahaka ny tsy dia tsara izany aho ary izany no mahatonga ahy te-hanontany ….ahoana no fomba handoavana mialoha ny fikarakarana “aorian'ny fiainana”…[Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: ny “after life – aorian'ny fiainana” eo dia mety milaza ny aorian'ny fahafatesana, izay efa anaovan'ny olona any ampita famandrohana sahady mikasika izay ho fikarakarana azy rehefa maty, vata, voninkazo, dorana sa tsia ,sns…. ]
Miarahaba, te hamindra ny vola azoko ho an'ny SOVA aho mba ahafahako manamora ny fitantanana ny vola tokony haloako. azonareo atao ve ny mamerina ny ambiny sisa tavela ho ahy atao amin'ny endrika tapakilan- tsakafo antoandro?
Nandeha an-tongotra aho androany no sady nihaino Mp3, tamin'izany no tonga saina aho fa nihira teny an-dalana teny. Afaka naheno izany daholo ny olona rehetra. Ka dia natahotra mafy aho ary natsipiko tany an-drenirano ny Mp3-ko avy eo. Mety hisy hanjo ahy ve noho io antony io?
Miarahaba, saxophonist ao amin'ny NASA no asako, manana fanontaniana aho :
Hatramin'izao, mbola tsy voaloantsika ny vola tamin'ny nampiasàna tany anatin'ny sambondanitra Voyager 1 sy 2 olona roa “mpiresaka amin'ny fanahin'ny maty”, miaty koa tahirim-peon'ny kaonseritr'ilay mpihira Slovaky malaza iray ankoatr'ireo maro hafa. Efa 34 taona lasa sahady izay, ary efa eny amin'ny moron'ny “système solaire” ireo sambondanitra… Misy fepetra azo ampiharina amin'ny lasa teo aloha ve izay natao indrindra ho an'ireny mozika “supertemporel” mifandraika amin'ny fandehanana amin'ny habaky ny fotoana ireny?
Miarahaba, eo am-pamakiana ireo fanontaniana sy valiny amin'ity toa fifanakalozan-dresaka ity aho dia tena nandona mafy ny handriko mihitsy. Tokony handoa zavatra aminao ve aho ?
Afaka fotoana vitsivitsy, araka ny hevitry ny Bilaogy Midra, taitra tamin'ny “hery vaikan'ny” “fanehoan-kevitra tambabe” avy amin'ny vahoaka, ny SOZA ka nihemotra tamin'ny fanaovana fanambarana fa raha rohy “hypertext” sy “code” natsofoka… tsy ilaina ny taratasy fahazoan-dàlana avy amin'ny SOZA”  [sk], sady narahana fialantsiny.
Na izany aza anefa, ny pejy FAQ  [sk] (faritra natao ho an'ny fanontaniana sy valiny) ao amin'ilay vohikala dia mbola misy fitsipika mifehy mamaritra hoe rahoviana no ilaina ny taratasy fifanarahana amin'ny mpamorona (midika hoe soloin'ny SOZA tena) momba ny fandrohizana mankany aminà “fichiers media” voatahiry any amin'ireo lohamilina samihafa.
Tamin'ny fanadihadihana  [sk] vao haingana nataon'ny SME, ny talen'ny SOZA dia namaritra fa na hatramin'izao aza dia “misy fomba fijery samihafa araka ny lalàna”, tsy hiala mora foana izany izy ireo nefa kosa hanao tsindry mba hanovàna ny lalàna. “Avy hatrany dia mitsipaka an'izany izahay, raha toa zaraina maimaimpoana ny votoaty any amin'ny tranonkala sasany.” “tsy mampino fa ny YouTube, na ny Google no marimarina kokoa, dia orinasa manankarena. Misy volabe ao anatin'io.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/08/04/20247/
 “Inona no atao hoe ROHY?”: http://midra.sk/nezaradene/dakujem-ti-soza
 “rohy hyperactive text”: http://blog.grecnar.sk/hyperaktivny-link-z-lasky-k-tebe-soza
 hypertext” sy “code” natsofoka… tsy ilaina ny taratasy fahazoan-dàlana avy amin'ny SOZA”: http://midra.sk/nezaradene/soza-si-nasrala-do-huby
 pejy FAQ: http://soza.sk/otazky/questions.php